Yonke imizi e yayo enhle futhi eyingqayizivele. Ngamunye has indaba yayo siqu engavamile futhi engaqondakali. Kungashiwo mayelana Nizhniy Novgorod. Umlando walo sihlehlela kusukela ekhulwini weshumi nambili. Khona-ke, emakhulwini amaningi eminyaka adlule, we edolobheni kwakungekho ukungabaza, kwaba nomhlangano iphuzu elincane phakathi kwemifula emikhulu emibili i-Russian ezifana iVolga and Oka. Wehlisa yaqala landa ngoba kwaba indawo "Nizovskaya" ezweni Veliky Novgorod. Kancane kancane, lo muzi ixazululwe, kwakukhona izakhiwo ezintsha, umkhakha athuthukile, ingqalasizinda - futhi thina namuhla idolobha lanamuhla ehlanganisa ngokuphelele nezakhiwo ezindala kanye izakhiwo zesimanje. Uma unesithakazelo lapho ukuya e Nizhny Novgorod, izindawo emangalisayo lapho kakhulu.
Lapho udinga ukuya endaweni okokuqala
Ukuze labo ababeza kuleli dolobha okokuqala, kudingeka ngokushesha get anobuthi sishaywe kumgwaqo main Bolshaya Pokrovskaya. Okuvelayo sihlale singeyona sibi kakhulu kunalokho okuboniswa phezu Arbat noma saseNevsky Prospect. Street zikanokusho futhi kuphela abahamba ngezinyawo. Safika Nizhny Novgorod? Kuphi ebusuku, awazi? Yebo-ke ivuliwe lo mgwaqo. Kuhlale kokwenza abaculi, ukuthengisa izinto eziyizikhumbuzo isiqondiso ekuphileni, amabalazwe komuzi. Futhi lokhu yilapho ungahlala ukuthola mayelana ezintsha emzini izindawo mlando.
Main ku-Main Street
Lena emgwaqweni lapho abahambahamba abantu abadumile, izivakashi, bendawo. Njalo indlu, zonke esakhiweni lapho ezihlobene nendaba. Lokhu kungaba emzini yesikhulu yizicukuthwane noma umthengisi, noma indlu lapho wahlala umuntu odumile. Umgwaqo amumethe eziqoshiwe. Njalo yemukela izivakashi "postman kanye ibhayisikili." Lokhu kuwuphawu pochtampa main omuzi. Uma uya phambili, ungaba at ebhayisikobho ngokuthi "Okthoba". It is eyakhelwe kanye nje lapho phambi inguquko kwaba esontweni lamaLuthela. Kukhona ngisho uphawu "intokazi Uyazazisa yena esibukweni." Ingabe zonke zibabaza, ngaphandle ukuthi isithombe kancane uhlanekezelwe. Futhi lapho kancane ukhathele, ungakhululeka ebhentshini edumile ngonodoli. Kukhona ngisho Ukwakheka isethi esizinikezele 'Umama nendodana. " Futhi kukhona izindawo mgwaqo eziningi.
Ugange lomuzi lwalwakhelwe emakhulwini amaningi eminyaka adlule, kanye neziningi zezakhiwo nasemigwaqweni waqala "ukuphila" yabo ku romantic ngekhulu weshumi nesishiyagalombili. Isakhiwo ubudala ezahlukene sekugcineni yasekuqaleni. Ziyakwazi emaceleni engavamile, ebaziwe izakhiwo eduze, izakhiwo ehlotshiswe yamatshe. Ucabanga ukuthi bayaphi e Nizhny Novgorod nentombazane? Akubalulekile ukubonakalisa isikhathi eside, udinga ngokushesha ukuya yashayisa unqenqema Fedorovsky. I landscape kukhona into eyisimanga ngempela. Ngaphezu kwalokho, kukhona epaki futhi "Switzerland". Kuyilungelo lomfula. Breeding epaki waqala ekuqaleni kwekhulu nesishiyagalolunye. Ngokokuqala ngqá uthisha waqala ukutshala izithombo nge abafundi babo kusuka samabanga aphakeme wendawo. Khona-ke iziphathimandla zishintshile, kodwa kwepaki wabhujiswa, amalungu Komsomol ku namathathu banesifo esibi sokukhohlwa lelo khulu leminyaka, waqhubeka esebenza ku ukuthuthukiswa yayo. Manje usesikhundleni nsimu enkulukazi. Kukhona hhayi kuphela izitshalo ezingavamile kakhulu futhi emangalisayo, kodwa futhi ugibele carousel. A ekhoneni epaki zoo amancane. Futhi kubhekwa indawo ozithandayo kakhulu izakhamuzi zedolobha. Ngemva wedding emcimbini onesizotha, cishe yonke imibhangqwana ulishiye khona.
Namanje ucabanga ukuthi bayaphi e Nizhny Novgorod? Akubalulekile ukucabanga, kodwa kuyadingeka ukuya Art Museum. Kuphela kukhona ungabona esithombeni enkulu "Phikisa Kozma Minin". Yena imayelana eziyisithupha amamitha ngobukhulu ukuphakama namamitha mayelana eziyisikhombisa ububanzi. Umculi ekukhuleni yayo eziningi uhlupho. Lona omunye wemisebenzi esiyingqayizivele kunazo. Ngaphezu kwalokho, Museum namanje eziningi imisebenzi ezithakazelisayo. Kukhona nemibukiso abaculi owayephila ezivela emhlabeni wonke. Kunezinye iminyuziyamu eminingi kuleli dolobha. Ngokwesibonelo, amakhanda Museum, Architecture Museum, Museum of Automobile Plant nabanye.
Lapho kunesidingo khona, kufanele uvakashele
Umangele lapho ukuya e Nizhny Novgorod izivakashi? izindawo ezinjalo kakhulu. Lokhu Museum bokwakha sokhuni, Exotarium, Kashirinyh endlini. Kuyadingeka ukuba sibheke Romodanovsky Isiteshi sesitimela, vakashela Ascension Caves Monastery, Gorky Museum, Manor Rukavishnikova River Fleet Museum, a Bistro isiFulentshi, nakwezinye izindawo eziningi. Uma uhlela uhambo kulo muzi, khona-ke kumelwe sikhumbule ukuthi izindawo ezithakazelisayo kakhulu kunengcebo eningi ngosuku olulodwa akwanele ukuba bajwayelane wonke umlando. Namanje ucabanga ukuthi bayaphi e Nizhny Novgorod? Sabe ukuya umcibisholo. Iyindawo lapho umuntu angabona yonke ingxenye enkulu yedolobha ngaphesheya komfula. Kukhona iphrezenthe ukubukeka engavamile futhi eyingqayizivele. Ngaphezu kwalokho, uma isimo sezulu sunny kanye nemfudumalo, lokhu lapho ungajabulela ukundiza Awama-Glider. Kulabo abafisa nethuba ungumnikazi futhi ujabulele indiza yakho.
Kanjani kangcono ukuchitha i kusihlwa emzini
Awazi lapho ukuya Nizhny Novgorod ebusuku? Qiniseka ezivulekile ebhayisikobho. Mhlawumbe ufana nabantu abaningi baye kuphela kubonakala kumafilimu American. Le filimu ingabonwa ngqo imoto yangasese. Udinga nje kuphela ukuba ukhokhele yokupaka futhi kungenzeka emotweni enkampanini yakhe ujabulele umbono. Azisekho amatiyetha abaningi ezweni lethu, futhi ukuthola ngendlela elula, futhi zonke izakhamuzi uyaziqhenya isakhiwo layo eliyingqayizivele njalo sizobonisa indlela. Uma lucky ngokwanele ukuba uvakashele edolobheni ezifana Nizhny Novgorod, lapho ungaya, siye yanquma okwamanje? Khona-ke musa ukuchitha isikhathi, futhi kubalulekile ukuya Kremlin. Imibono enanikade yokubhidliza lesi sakhiwo futhi esikhundleni ukwenza umgwaqo ezinhle eMfuleni iVolga. inhlanhla ezibiyele kuphela wamshiya, futhi, ngaphezu kwalokho, kwabuyiselwa. Ezinye zindawo spoilt, ngakho wakhipha umyalo wokuba izitini ekhethekile Ubukhulu ekhethekile ukuba babuye kuleli ukwakhiwa eziyingqayizivele ukubukeka yokuqala. Abakhi eziningi imizamo emihle eningi izwe labo elinayo. Kube ngisho kwesokunxele ngamabomu encane ekhoneni neotrestavrirovannoy udonga. On ke ungakwazi ukuhamba.
Idolobha lanamuhla lona
Uma ukhathele kusukela ngosuku kanye nokuvakashela izindawo ukuvakashelwa abazi lapho ukuya Nizhny Novgorod, ungakwazi axazulule cafe ethokomele. izikhungo okunjalo kwamasiko khona kakhulu. Izakhamizi ungakhohlwa umlando wabo futhi ngesikhathi esifanayo kukhona "phezulu" ngokuhamba kwesikhathi. Ukwakhiwa entsha izifunda yokuhlala, nezitolo ezinkulu kokuvula, izitolo, ezokungcebeleka izikhungo. Kodwa ntandokazi namanje kudingekile ukuba akunike izinsuku ubudala.
Lapho uzokwazi ukuvakashela art-cafe "Buffet", incwadi kuphela kangcono endaweni lapho kusengaphambili. Kukhona amakhonsathi, imihlangano nge abaculi, abaculi. Uma umninikhaya wokuqala wahlangana hussar, wamnika ikhofi, okulungiselelwe iresiphi ekhethekile, futhi ngakho ikhofi like Ngaphawula ukuthi selokhu umngane abanikazi washintsha, kanye ikhofi ibhalwe kanjalo nje. Kukhona enye indawo eyingqayizivele "Literary Cafe Pierre has." Elungele ukuhamba lapho eziningi. Uma kwakungekho, ngakho-ke, ngangingekho Nizhny Novgorod. Le ndawo futhi olufanele ukuze anakekele kusengaphambili. Kukhona imihlangano nge abalobi nabantu nje lokudala. Asikho isidingo sokwesaba ukuthi kuyosala "elambatha". Kuhlala kwasemini ezinhle. Zonke okulungiselelwe iresiphi ekhethekile. Kubalulekile ukuba banake imenyu. Ezinye izingxenye kungaba esikhulu, kuyilapho abanye, kunalokho, amancane. It Ubuye ngobuqili bayo siqu. Futhi cafe ngokwayo uhlukile. Lapho ekungeneni, singaphetha ngokuthi kwakukhona izimpi esibi muva nje, ezinye izindonga isigamu-wonakele nezinye sekugcineni Antique eliyingqayizivele, futhi ingxenye yesithathu isitini elingenalutho. Noma kunjalo, uyindawo ethokomele futhi zikhululekile kakhulu.
Pashkov House: umlando e itshe, ezinemishwe phakathi namakhulu eminyaka
Lake Pskov: izithombe, ukuzilibazisa nokudoba. Izibuyekezo eseholidini e Lake Pskov
Logic: isihloko. Umqondo: umqondo, ukubaluleka, umenziwa kuncike logic njengoba isayensi
Warm jacket spokes: isikimu kanye nencazelo
Ikhekhe "Earl bonakalisa": esidlweni best for iholidi
Northern Dvina River: indawo kanye nezici jikelele
Uphawu izincwadi - kuwuphawu imfihlakalo
Uhudo ezinjeni ngegazi: ukuthi yenzeni